China YASKAWA HANDLING ROBOT MOTOMAN-GP200R mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
YASKAWA UKUPHATHA IROBOT MOTOMAN-GP200R
IMOTOMAN-GP200R, i-6-axis emi nkqo ngokudibeneyo, irobhothi yokuphatha imvelisoNgobutyebi bemisebenzi kunye nezinto ezingundoqo, inokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaninzi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukuhlanganisa, ukusila, kunye nokulungiswa kwamalungu amaninzi. Owona mthwalo uphezulu yi-200Kg, owona mgangatho uphezulu wezenzo yi-3140mm.
Ukusetyenziswa kwe ukuphatha iirobhothi kwiinkalo ezininzi zemveliso kubonakalisile ukuba inendima ebalulekileyo ekuphuculeni umgangatho wokuveliswa kwemveliso, ukuphucula imveliso kunye nomgangatho wemveliso, izibonelelo zoqoqosho, kunye nokuphucula iimeko zokusebenza zabasebenzi.
I-MOTOMAN-GP200R, i-6-axis emi nkqo ngokudibeneyo, irobhothi yokuphatha imveliso, ngobutyebi bemisebenzi kunye namacandelo asisiseko, anokuhlangabezana neemfuno zoluhlu olubanzi lwabasebenzisi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukuhlanganisa, ukusila, kunye nokulungiswa kwamalungu amaninzi. Owona mthwalo mkhulu yi-200Kg, owona mgangatho uphezulu we-3140mm, kwaye kufanelekile kwikhabhathi yolawulo ye-YRC1000. Ukusetyenziswa kubandakanya ukuphatha, ukuthathwa / ukupakisha, ukugoba, ukuhlanganisa / ukuhambisa, njl.
Inkqubo ye- I-GP200R yokuphatha iirobhothi inciphisa inani leentambo phakathi kwerobhothi kunye nekhabhathi yolawulo, iphucula ukugcinwa ngelixa ibonelela ngezixhobo ezilula. Iishelufu zingasisebenzisa ngokufanelekileyo isithuba, kwaye ziqonde ubume beesekethe ezimibalabala ngokudibana nezinye iirobhothi. Kukulungele ngakumbi ukusebenzisana nezinye izixhobo.
6 200Kg Ubukhulu: 3140mm ± 0.05mm
1760Kg 5.0kVA 90 ° / umzuzwana 85 ° / umzuzwana
85 ° / umzuzwana 120 ° / umzuzwana 120 ° / umzuzwana 190 ° / umzuzwana
Ukujonga kwiimveliso ezisungulwe ziirobhothi zehlabathi kwiminyaka yakutshanje, I-GP uthotho lokuphatha iirobhothi Itekhnoloji iyaphuhliswa kwicala lobukrelekrele, ukumodareyitha kunye nokwenza inkqubo. Iimpawu zophuhliso lwazo ikakhulu: ukumodareyitha kunye nohlengahlengiso lolwakhiwo; ulawulo lwethekhnoloji Ukuvuleka, i-PC kunye nothungelwano lwenkqubo; ukwenziwa kwamanani kugunyaziso lobuchwephesha be-servo drive; ukusebenziseka kwetekhnoloji ye-fusion ye-multi-sensor; ukulungiswa koyilo lokusingqongileyo kunye nokuguquguquka kokusebenza, kunye nokunxibelelana kunye nobukrelekrele benkqubo.
Egqithileyo YASKAWA UKUPHATHA I-ROTOT MOTOMAN-GP180
Okulandelayo: IYASKAWA ephethe irobhothi MOTOMAN-GP225
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic,